एक पटक सड़कमा ओर्ले पछि जनता हार्छ कहिले? आंदोलन गंतव्य मा पुगिनसकेको चाहिँ हो। तर यो ढिलाई ले साढ़े तीन पहाड़ी दल को मधेसमा संगठन ध्वस्त गर्ने काम गरेको छ। पंचायत ढले सरि ढलिसके। मधेसियाले इंटरटेनमेंट मा कम राजनीति मा बढ़ी पैसा खर्च गर्छ। २०४५ मा के थियो काँग्रेस को संगठन? २०४७ मा ह्वात्तै जो बढ्यो त्यो कसले बनायो? मधेसियाले बनायो। त्यस्तै अहिले मधेसी मोर्चा का पार्टी हरुको त्यसै गरी संगठन विस्तार भएको छ। यो हारेको भन्ने कि जितेको भन्ने? हार को त सवाल नै छैन। नेता हार्न सक्छ, जनता कहिले हार्दैन। यहाँ न नेता न जनता हारेको अवस्था छ।
मधेसी ले अधिकार मागेको हुँदै होइन। को हो र त्यो ओली? मधेसीले हामीले अधिकार पाए तिमीले पनि पाउने, हामीले नपाए तिमीले पनि नपाउने भनेको हो। मांगचांग गर्ने मधेसी को शैली होइन। ११ बुँदे सम्बोधन नभए सम्म कसको मजाल छ मधेसमा यो न संघीयता न समावेशीता भएको apartheid संविधान लागु गर्ने? लागु नै हुँदैन। उपन्यास लेखे जस्तो तिमी लेख संविधान काठमाण्डु मा बसेर। कलम धसेर हुने भए। यो संविधान मा संघीयता छ भने पंचायती संविधान मा पनि प्रजातंत्र थियो। किन समस्या परेथ्यो काँग्रेस र वाम लाई?
अहिलेसम्म त वार्म अप हो। आंदोलन शुरू नै कहाँ भएको छ? ऋतु को पनि कुरा आउँछ।
अहिले सम्म केही खास गलती भएको छैन। आत्म समीक्षा को नाम मा हुँदै नभएको गलती हरु खोज्न मा टाइम पास नगर्ने। लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता मा आधारित आंदोलन मा समीक्षा त दैनिक हुन्छ। लोकतंत्र भनेको जनता भन्दा माथि कोही हुँदैन भनेको न हो। भने पछि समीक्षा को प्रक्रिया त कहिले पनि थमदै थमदैन।
गएको छ महिना देखि मधेशमा भएको आन्दोलनको तराई मधेशको स्थानिय राजनितीक सतह मात्रै होइन कि आम मधेशीहरुको राजनितीक मनस्थितीमा समेत व्यापक परिर्वतन आएको वेला मधेशी पार्टीहरुले यस्तो लेखाजोखा गर्न व्यवस्त देखिन्छ । ...... आन्दोलन सुरु भए संगै तराई मधेशमा प्रमुख भनाउदा पार्टीहरु प्रति मधेशमा व्यापक असन्तुष्टि देखिए र तराई मधेशका जिल्लहरुमा ती पार्टीहरु सम्बद्ध मधेशी नेताहरु धमाधम पार्टी परित्याग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले । ...... अघिल्लो सोमवार तमलोपाका शिर्ष नेताहरु वारा पुगेर चार जिल्लाका स्थानिय नेताहरु संग बैठक गरे । त्यस लगतै तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर जनकपुर तिर पुगेर त्यस क्षेत्रका नेताहरु संग आन्तरिक छलफल गरे भने उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी पश्चिम तिर गएर त्यस क्षेत्रका स्थानिय नेताहरु संग बैठकहरु गरे । ....... बैठकले पछिल्ले परिस्थितीको वारेमा आन्तरिक रुपमा बृहत छलफल गरीरहेको सदभावनाका नेताहरुले बताएका छन । ..... त्यसैगरी पछिल्लो परिस्थितीको सन्दर्भमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत आन्तरिक रुपमा स्थानिय तह देखि केन्द्रिय तहमा विभिन्न स्तरका छलफलहरु तीव्रगतीमा गरिरहेको देखिन्छ । ....... मोर्चा वाहिरका घटकहरु तर आन्दोलनमा सक्रिय रहेको जय प्रकाश गुप्ता नेतृत्वको तराइ मधेश राष्टिय अभियान देखि मातृका यादव नेतृत्वको संयुक्र जनआन्दोलन समिती सम्मको पनि बैठकहरु पछिल्लो समयमा तराई मधेशका जिल्लाहरुमा चलीरहेको देखिन्छ । विभिन्न स्तरको स्थानिय तहमा समुहगत रुपमा गुप्ता नेतृत्वको बैठक अभियान चलीरहेको देखिन्छ भने मातृका यादव नेतृत्वको जनआन्दोलन समितीको पनि हालै राजविराजमा विस्तारित बैठक बसेको थियो ।
होइन हामी मधेशीहरु सधैको यस्तै नै रहने भयो त ? हेरौ त, पहाडीहरुलाई, हामीले अधिकार माग्दा उनीहरु सवै कसरी एक भएका छन । ...... हामी मधेशीहरु जनता देखि नेता सम्म एक ठाउ अझै उभिन सकिरहेका छैनौ अनि कसरी हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ । यत्रो आन्दोलन गर्यौ आखिर सवै पहाडीहरु एक भएर हामीलाई त केहि दिएन नी ...... हामी चाही संसदवादी र गैरसंसदवादीमा अझै पानी वारावार गरेर बसेका छौ ...... याहा तराई मधेशका लाखौ लाख नागरिक सडक देखि वोर्डर सम्म प्रर्दशन गरीरहदा मधेशी नेताहरु काठमाडौमा वालुवटारको मुख किन ताकेर बसेका होला ? ....... सबै मधेशी नेताहरुले किन काठमाडौ छाडन सकेनन ......
काठमाडौ प्रति पहिला भन्दा पनि वितृष्णहरु फैलिरहेको देखिन्छ भने प्रमुख दलहरुले हाम्रो आन्द्योलनलाई सम्बोधन गरेनन भन्ने गहिरो घृणा मधेशमा फैलिरहेको छ ।
....... नाका र आमहडताल खोलेर मोर्चाले ठिक गरे पनि आन्दोलनलाई ठिक ढंगले मोर्चाको केन्द्रिय तहले हाक्न नसकेको अनुभुति मधेशमा पाइन्छ । ...... यसले काठमाडौ प्रति थप आक्रोश पनि वढदै गईरहेको ...... आम मधेशीको अहिले तपाईले एउटा समान बुझाइ पाउनु हुन्छ, मिश्रा भन्छिन, काठमाडौ अर्थात सरकार वा प्रमुख दलहरुले मधेशीहरुको यत्रो आन्दोलनलाइ सम्बोधन गरेनन । ..... मधेशी युवाहरुमा खासगरी व्यापक भडकावको अवस्था विस्तारै सिर्जना हुदै गईरहेको छ ...... काठमाडौले जती सजिलो सोचिरहेका छन, उनलाई त्यती नै महंगो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । ....... काठमाडौ वाट मोर्चाको केन्द्रिय तहले आन्दोलनको स्वरप् परिर्तन गरेको घोषणा गरे संगै मोर्चाका शिर्ष नेताहरु मधेश दौडाहामा लागेका छन । स्थानिय स्तरमा आफना नेताहरुसंगको भलाकुसारीमा व्यवस्त मोर्चाका शिर्ष नेताहरु विगत छ महिना देखि जारी आन्दोलनको वारेमा स्थानिय सतहको वारेमा विस्तृत छलफलहरु गरिरहेका छन । ....... आन्द्योलन हामीले जती वेला चाहन्छौ त्यती वेला उठन सक्छ तर पछिल्लो चरममा छ महिना देखि जारी आन्द्योलनको समिकक्षा गर्नु पर्ने आवश्यकता भएकाले र आन्द्योलनको रणनितीमा केहि परिवर्तनको महसुस भएकाले अहिले मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन गरेको छ । ....... मधेशी नेतृत्वहरुको अहिले आलोचना हुनु स्वभाविकै छ, तर
मधेशको मनसिथ्ती अझै आन्दोलनमय नै छ ।
....... लामो बन्दीले याहाको सम्पुर्ण व्यापार चौपट भएको छ, लामो बन्दले विद्यार्थीहरुको पढाइ पुर्णरुपमा प्रभावित भयो, त्यसैले अवको रणनीती र भावी आन्दोलन पुर्ण बन्द भन्दा पनि प्रभावकारी र काठमाडौलाई सिधा प्रभाव पार्ने खालको हुनु पर्ने ..... प्रमख दलहरुले जसरी एक्लौटी रुपमा अघि वढीरहेको छ, यसले सेलाएको जस्तो हाल देखिएको मधेश आन्दोलन पुन चर्कन्छ